नारायणगढ, २० कात्तिक । गैंडाकोटको तात्रीवास जोड्ने जयश्री खोलामाथि निर्माण गरिएको पक्की पुलको नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले उद्घाटन गरेका छन् ।
चितवन गुरास इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपर्स प्रालिको आर्थिक सहयोगमा ४० लाखमा निर्माण भएको उक्त पुलको सोमबार उद्घाटन गरिएको हो । ९२ फिट लामो उक्त पुल निर्माणपछि गैंडाकोट गाविसको ३, ४, ५, ६ र ८ वडावासीहरु लाभान्वित भएको स्थानीय लक्ष्मी रिमालले बताइन् ।
यसै बीच रोटरी गुरास आवाशीय क्षेत्र गैंडाकोटमा सोमबार शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । दशैं, तिहार, छठ, इदलगायत सवै चाडपर्वको अवसर पारेर शुभकामना आदान–प्रदान गरिएको हो ।
चितवन गुरास इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दिनेशकुमार चुकेको अध्यक्षतामा सम्पन्न शुभकामना कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, चितवन रोटरी क्लवका अध्यक्ष उत्तमलाल चुके, गैंडाकोट गाविस सचिव पदमप्रसाद घिमिरे, नेपाली काँग्रेस चितवनकी नेतृ गीता वाग्ले लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
भरतपुर, २० कात्तिक । इन्सेक जिल्ला कार्यालय चितवनको आयोजनामा सोमबार नारायणी विद्यामन्दिर उमावि शिवनगरमा मानवअधिकार शिक्षा बिषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला कार्यक्रम संयोजक मुकुन्द दाहाल, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता उद्धव लोहनी, विद्यालयका प्राचार्य रामसुफल रायलगायतले सहजिकरण गरेका थिए ।
जिल्ला संयोजक मुकुन्द दहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा साबित्री सापकोटा, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका पूर्वउपाध्यक्ष हरि आचार्य लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
झण्डा उल्टो रहेको दावी
भरतपुर, २० कात्तिक । कवि वैजनाथ देवकोटाले नेपालको झण्डा उल्टो भएको तर्क गरेका छन् । उनले सोमबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैदिक धर्म अनुसार राष्ट्रिय झण्डा उल्टो भएको दावी गरे ।
पृथ्वीदेखि चन्द्रमा भन्दा सूर्यको दुरी टाढा भएकाले झण्डामा पनि सूर्यलाई माथि राखिनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘हाल देशमा भएका अशान्ति तथा अनिष्ठका घटनाको मुख्य कारण देशको झण्डा उल्टो भएकैले हो’ उनले तर्क अघि सारे ।
देवकोटा समाजका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षता भएको पत्रकार सम्मेलनमा गोविन्दराज विनोदी, डी.आर. पोखरेल, टंकराज ढकाल, केशव देवकोटा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
भरतपुर, २० कात्तिक । जाडो समयमा पनि डेङ्गु रोग देखा परेपछि आवश्यक सावधानी अपनाउन सोमबार भरतपुरमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई डेङ्गु रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम भएको छ ।
चितवनका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई भरतपुरमा प्रशिक्षण दिइएको हो । जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले गरेको कार्यक्रममा चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सक डा. अरुण सेढाई, भरतपुर अस्पतालका डा भोजराज अधिकारीले लगायतले सहजिकरण गरेका थिए ।
मिल्क होलिडेको विरोध
नारायणगढ, २० कात्तिक । दुग्ध विकास संस्थाले सातामा दुइपटक मिल्क होलिडेले गर्ने भन्ने खवरप्रति व्यवसायिक दुग्ध उत्पादक कृषक समाजले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
दुधको माग हुँदाहँुदै कृषको हितविपरित गरिने कार्यको घोर भ्रत्सना गर्दै मिल्क होलिडे नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
समाजका अध्यक्ष आनन्द न्यूरेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा दुध बढि भएको भन्दै गरिएको प्रचारवाजीको विरोध गरिएको छ ।
साइकल यात्रा सम्पन्न
नारायणगढ, २० कात्तिक । सिनर्जी एफएमको बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित चितवन–लुम्बिनी साइकल यात्रा २०६९ का सहभागी साइकलयात्रीहरु आइतबार फर्किएका छन् ।
उनीहरुलाई साँझ नारायणगढमा एफएमका प्रबन्ध निर्देशक सहन प्रधानले स्वागत गर्दै सफल यात्राका लागि बधाई ज्ञापन गरेका थिए । सिनर्जी एफएमसँगै चितवनका पाँच वटा रोटरी तथा पाँच वटा रोट्रयाक्ट क्लबहरुले संयुक्त रुपमा गरेको स्वागत कार्यक्रममा चितवन गैंडाकोट रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष तथा रोटरी क्लव अफ चितवनका पूर्व अध्यक्ष भोजराज कौडेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
यसअघि, आइतबार साईकलयात्रीलाई लुम्बिनी क्षेत्र विकास समितिले स्वागत तथा सम्मान गरेको थियो । समितिको सूचना केन्द्रमा भएको कार्यक्रममा पत्रकार सम्मेलनसहित साईकलयात्राका सहभागीलाई स्वागत र अभिनन्दन गरिएको थियो ।
रत्ननगरमा सफल कम्युनिटी बैंक
भरतपुर, २० कात्तिक । रत्ननगरमा शाखा स्थापनाको एक बर्षमा नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेण्ट बैंक लि.ले मुनाफासँगै जनतालाई सुविधा प्रदान गर्न सफल भएको बताएको छ ।
उक्त बैंकले निक्षेपकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिंदै सरल र सहज ढंगले कृषि, विपन्न वर्ग र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी केन्द्रित गरिरहेको टाँडी शाखा ईन्चाज अनिता गिरीले बताइन् । बैंकले मंगलबार शाखा स्थापनाको एकबर्ष पुरा गरी दोश्रो बर्षमा प्रवेश गर्दैछ ।
दोश्रो वर्ष प्रवेश प्रवेशसँगै बैंकले अत्याधुनिक बैकिङ प्रणालीमार्फत् वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने, ग्राहकवर्गको चाहना अनुरुप सेवा प्रवाह गर्ने र निकट भविश्यमै देशका अन्य शहरहरुमा पनि शाखा विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।
हात्तीको आक्रमणबाट बृद्धको मृत्यु
नारायणगढ, १८ कात्तिक । जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट चितवनको माडी, गर्दी गाविस –१, इमिलीयामा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको हात्तीले आक्रमण गर्दा आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा स्थानीय ७० वर्षीय अमरबहादुर थापा मगरको मृत्यु भएको हो । थापालाई हात्तीले राति १२ बजेको समयमा आक्रमण गरेको स्थानीय लालबहादुर बिश्वकर्माले जानकारी दिए ।
करिब दुई महिना अघिबाट त्यसक्षेत्रमा बस्दै आएको हात्तीले स्थानीयले लगाएको ४० बिगाह जमिनको धान नष्ट गरेको छ । हात्ती नियन्त्रण गर्न स्थानीयले पटक पटक सरोकारवालासँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।
केराको उत्पादनमा ह्रास आउने
नारायणगढ, १४ कात्तिक । यसवर्ष आएको हावाहुरीका कारण केरा उत्पादनमा ह्रास आउने भएको छ ।
गएको वैशाख महिनादेखि पटकपटक आएको हावाहुरीले एकसय आठ विगाह क्षेत्रफलमा लगाएको केरावाली नष्ट पारेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । गएको वर्ष १० हजार पाँचसय ६० मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा हावाहुरीका कारण केराको बोट नष्ट भएपछि उत्पादनमा ह्रास आउने भएको कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक निलकण्ड पौडेलले जानकारी दिए ।
हावाहुरीबाट केरा नष्ट ह"ुदा करिव दुइ करोड ३३ लाख रुपैया" बराबरको क्षती भएको कार्यालयले जनाएको छ । यो क्षतिको रकम अनुमानित भएकाले क्षति अझ बढि हुनसक्ने प्राविधिक सहायक पौडेलले बताए । हुरीबाट भएको क्षतिको विवरण विभागमा पठाएकाले चाँडै राहत आउने पौडेलले जानकारी दिए । जिल्लामा अहिले व्यवसायिक केरा खेती गर्ने कृषकको सख्या तीनसय ३७ पुगेको छ । छसय ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएको छ । चितवनमा मालभोग, झापाली मालभोग, विलियम हाइब्रिड र रोबास्टा जातिका केरा खेती हँुदै आएको छ ।
गैंडाको आक्रमणमा ज्यान गयो
रत्ननगर, १७ कात्तिक । चितवन राष्ट्रिय निकुज्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत बछौली १ बद्रहनी खगेरी खोला छेउमा बिहीबारराती गैंडाको आक्रमणबाट एक जना बृद्धको ज्यान गएको छ ।
खोलामा भैसी चराउन गएका स्थानीय ७५ वर्षीय मुङ्ठा महतो राती अवेरसम्म पनि घर नआएपछि खोजतलास गर्दा उनी शुक्रबार विहान मृत अवस्थामा फेला परेका मृगकुज्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति बछौलीका कार्यालय सचिव रामकृष्ण पराजुलीले जानकारी दिए ।
गैंडाकोट, १३ कात्तिक । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको गैँडाकोटमा आइतबारराति ट्रकको ठक्करबाट दुई युवकको मृत्यु भएको छ ।
पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको ना२ख ३७९८ नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको ना १५ प ५९६७ नम्बरको मोटरसाइकललाई गैँडाकोट– ९ थुम्सीमा ठक्कर दिँदा स्थानीय दुई युवक देवबहादुर थापा र भरत रानाको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटले जनाएको छ ।
ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकाहरूको भरतपुर मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको गैँडाकोट प्रहरीले जनाएको छ । उक्त घटनापछि दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पीडितहरुले केही समय सडक अवरुद्ध पारेका थिए ।
सिनर्जीको साइकल यात्रा
नारायणगढ, १६ कात्तिक । आफ्नो स्थापनाको ११ वर्ष पूरा गरी १२ वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर सिनर्जी एफएम भरतपुरले लुम्विनी साइकल यात्रा २०६९ को आयोजना गरेको छ ।
विभिन्न छ बँुदे उद्देश्य लिएर साइकल यात्रा आरम्भ गरेको एफएमले विहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराएको छ । वातावरण जगेर्ना गर्न, चितवनलाई साइकल सिटीको रुपमा विकास गर्न, आर्थिक मितव्यताको लागि, साइकलमैत्री सडक बनाउनको लागि दवाव दिन, लुम्विनी भ्रमण वर्षको प्रवद्र्धन र सामाजिक संघसस्थासँग सहकार्य गर्नको लागि साइकल यात्राको आयोजना गरिएको एफएमका प्रवन्ध निर्देशक सहन प्रधानले जानकारी दिए ।
साइकल यात्रा भरतपुरबाट शुरु भई लुम्बिनीमा पुगेर समापन हुने बताइएको छ । रोट¥याक क्लव अफ भरतपुर, रत्ननगर र प्राउड नेपालको सहकार्यमा साइकल यात्रा गरिएको हो । कात्तिक १७ गते यात्रा प्रारम्भ भई १९ गते समापन हुने जानकारी दिइएको छ ।
यात्रामा १७ जना युवाहरुले सहभागिता जनाउने एफएमका स्टेशन म्यानेजर अमर प्रधानले बताए । सहभागी युवाहरुको आफ्नै खर्चमा साइकल यात्रा गरिएको यात्राका संयोजक विष्णुकान्त काफ्लेले जानकारी दिए ।
तरुणदलको स्थापना दिवश
नारायणगढ, ११ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलको ५९ औं स्थापना दिवस चितवनका तरुणहरुले दुई समूहमा विभाजित भई छुट्टाछुट्टै रुपमा मनाएका छन् ।
केन्द्रीय समितिद्वारा गठित राम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको (संस्थापन पक्ष) समितिले हाम्रो घर नारायणगढका बालबालिकालाई खाना खुवाएर मनाएको थियो । यसैगरी असन्तुष्ट पक्षधर (बिद्रोही) समूहले शशी खनियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रस भवनमा चियापान कार्यक्रम गरेको थियो ।
संस्थापन पक्षको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति टेकप्रसाद गुरुङ प्रमुख अतिथी रहेका थिए भने असन्तुष्ट पक्षको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी नेपाली कांँग्रेस चितवनका निवर्तमान सभापति विकास कोइराला रहेका थिए ।
तस्करी रोक्न चौबिसै घण्टा गस्ती
जुटपानी, १५ कात्तिक । उदयपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जुटपानीले चाडबाडको समयमा हुन सक्ने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न चौबिसै घण्टा वन गस्ती थालेको छ ।
समूहले घटस्थापनादेखि कार्यसमितिका पदाधिकारी, वन हेरालु र उपभोक्ता समेत परिचालन गरी रातीको समयमा पनि गस्ती गरिरहेको समूहका अध्यक्ष केशव लामाले जानकारी दिए । दैनिक १० देखि १५ जनाको टोलीले वन क्षेत्र र वरपरको गाँउमा गस्ती गरिरहेको अध्यक्ष लामाले बताए ।
चार्डवाडको समयमा वन गस्ती बढाएपछि अहिलेसम्म वन पैदावार चोरी तस्करीको घटना हुन नपाएको उनले बताए । वन गस्तीको क्रम तिहारसम्म पनि निरन्तर रहने लामाले जानकारी दिए ।
नारायणगढ, ४ कात्तिक । दशैं तिहारको अवसरमा नेपाल परिवार दल चितवनले शनिबार शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय भरतपुरमा भएको कार्यक्रममा पार्टीका कार्यकर्ता तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले एकआपसमा शुभकामना साटासाट गरेका थिए ।
जिल्ला अध्यक्ष अनिलकुमार खनियाँको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल परिवार दलका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद ज्ञवाली, जिल्ला सल्लाहकार बलविक्रम थापा, सहसचिव केशव आचार्य, प्रेस चौतारी चितवनका अध्यक्ष शालिग्राम नेपाललगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल चितवनले दशैंको अवसर पारेर शुभकामना आदानप्रदान गरेको छ ।
संस्थाको शनिबार बसेको बैठकमा संस्थाका सदस्यहरुबीच शुभकामना आदानप्रदान गरिएको संस्थाद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कार्यक्रम टीकाराम लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।